तोडियो भारतीय एकाधिकार, चीनबाट आयो नेपालमा इन्टरनेट – Etajakhabar
तोडियो भारतीय एकाधिकार, चीनबाट आयो नेपालमा इन्टरनेट
काठमाडौं, २७ पुस । नेपालको स्थलमार्गबाट हुने इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता अब चीनबाट पनि हुने भएको छ । यही २८ पुसदेखि नेपाल चिनियाँ बाटो हुँदै इन्टरनेटको विश्व–सञ्जालमा जोडिने निश्चित भएको हो ।
नेपाल र चीनबीच निर्माण भएको क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंकको औपचारिक उद्घाटन आगामी शुक्रबार हुँदै छ । त्यसपछि नेपालले चीन हुँदै विश्वबजारको दूरसञ्चार नेटवर्कमा आबद्धता जनाउनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
नेपालको स्थलमार्गबाट हुने दूरसञ्चारको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतामा भारतीय एकाधिकार तोडिने भएको छ । नेपालले चीन हुँदै विश्वबजारको दूरसञ्चार नेटवर्कमा आबद्ध हुने बाटो खुलेसँगै भारतीय एकाधिकार तोडिने भएको हो । विश्वव्यापी दूरसञ्चार नेटवर्कमा आबद्धताका लागि स्याटेलाइट र केबल गरी दुईवटा माध्यम छन् ।
हाल नेपालले दूरसञ्चारमा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धताका लागि एकभन्दा बढी मुलुकको स्याटेलाइट प्रयोग गरे पनि स्थलगत आबद्धता भने भारतबाट मात्रै हुँदै आएको छ । चीनसँग अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएसँगै अब नेपालले भारतबाहेक चीनको बाटो हुँदै विश्व दूरसञ्चार सञ्जालमा जोडिने प्रवक्ता वैद्यले बताइन् ।
अघिल्लो वर्ष हङकङमा भएको सम्झौता कार्यक्रममा सिटिजीका कार्यकारी उपाध्यक्ष ओउ यानले हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो रुट विस्तार गरिरहेको र यसबाट नेपाल–चीन रुटमा सेवा प्रदान गर्नुका साथै भारतबाट समेत ट्रान्जिट सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
नले हिमालय क्षेत्रमा बिछ्याएको अप्टिकल फाइबरबाट नेपाल र नेपाल हुँदै दक्षिण एसियाली मुलुकसँग आबद्धता हुन चाहेको जनाएको छ । यसका लागि चीनले नेपालसँगको अर्को कुनै एक नाकाबाट समेत इन्टरनेटमा आबद्धता हुन चाहेको टेलिकमका एक अधिकारीले बताए ।
‘चीन र भारतबीच सिक्किमबाट इन्टरनेट आबद्धता थियो, तर सुरक्षाका कारण त्यसलाई बन्द गरिएको छ,’ उनले भने, ‘चीनले नेपाल हुँदै भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकमा जोडिन चाहेको बताउँदै आएको छ ।’
एसियामा इन्टरनेट डाटा सेन्टरको मुख्य हब सिंगापुर र हङकङलाई मानिन्छ । भारतको दिल्ली र मुम्बई पनि ठूला हब हुन् । हालसम्म नेपालको नेटवर्क भारतको चेन्नई हुँदै सिंगापुर पुग्छ र समुद्रीमार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिन्छ ।
अब चीनतर्फको नेटवर्क केरुङ, ल्हासा हुँदै हङकङ जोडिनेछ । चीनबाट जोडिने सञ्जाल भारतीयभन्दा निकै छोटो रहेको टेलिकमले जनाएको छ । दूरी छोटो भएकै कारण इन्टरनेट सेवा सस्तो हुनुका साथै स्तरीयसमेत हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
भारतले ०७२ मा लगाएको नाकाबन्दीपछि नेपालले इन्टरनेट व्यान्डविथका लागि समेत वैकल्पिक मार्ग खोज्नुपर्ने बहस सुरु भएको थियो । त्यसपछि संसदीय समिति र सरकारले टेलिकमलाई चीनतर्फबाट पनि दूरसञ्चारको अन्तर्राष्ट्रिय स्थल आबद्धतामा जोडिन निर्देशन दिएको थियो ।
संसद् र सरकारको निर्देशनपछि टेलिकमले भदौ ०७३ मै केरुङ नाकामा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याएर चाइना टेलिकम ग्लोबलको अप्टिकल फाइबरसँग जोडिएको थियो । त्यसपछि मंसिर ०७३ मै दुई सेवाप्रदायकबीच आइपी सर्भिस आदान–प्रदानका लागि औपचारिक सम्झौता भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २७, २०७४ समय: ७:४०:१५
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा नक्कली पासपोर्ट पत्ता लगाउने डिभाइस जडान, अब कुनै पनि अपराधी उम्कन नपाने
भुलेर पनि धेरै समय नचलाउनुहोस् मोवाइल, बढी मोबाइल प्रयोगले ब्रेन ट्युमर
सरकारले सडक बत्तिमा मानिसहरुको अनुहार चिन्ने जासुसी क्यामरा जडान गर्ने
सिरियामा अमेरिकाले हान्यो आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली टम हक मिसाइल, यो कति शक्तिशाली छ ?
स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकहरुका लागि लक्षित गरी लुम्बिनीमा अब विद्युतीय सवारी साधन चल्ने
काममा किन ढिलासुस्ती भयो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँगै ऊर्जा मन्त्री र चिनियाँ राजदूत लिएर पुगे माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निरिक्षण गर्न !
७२ हजारमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई एक युवकले बनाएर दिए मोटरसाइकल, जस्ले कारलाई पनि मात खुवाउने छ हेर्नुहोस भिडियोमा
काठमाडौंका यी ७ ठाउँमा अब इन्टरनेटको पैसा तिर्नु पर्दैन
यस्तो स्थान जहाँ गएर मरुन्जेली चिच्याउँदा तपाइँको मोबाइल चार्ज हुन्छ, जान्नुहोस् यो रोचक तथ्य